Siyaabaha ugu fudud ee Laablaab Videos iPhone in la saxo Orientation
> Resource > iPhone > Sida loo Laablaab iPhone (5S / 5C / 5 / 4s / 4) Video Files
Marka lagu qoro videos la camera iPhone, iPhone isku shaandheyn doonaa video si toos ah waxay ku xiran tahay sida aad u qabtaan. Laakiin markii wareejinta videos kuwaas oo si aad PC ama Mac, waxaad ka heli kartaa warbaahinta ciyaaryahanka uusan ciyaari karo qaar ka mid ah si sax ah, qaar ka mid ah geesgees u yihiin, qaar ka mid ah yihiin ka yeellay korkoodii. Haddii aad isku dayday in qaar ka mid ah software iPhone in waxba idiinma tarin, halkan ka heli xal kaamil ah.
Xalka 1: beddesha iPhone video la editor desktop video
Solution 2: beddesha iPhone video la app iPhone video tafatirka
Haddii aad rabto in aad isku shaandheyn ku iPhone video, video desktop wanaagsan editor - Wondershare Filmora kaa caawin kara. Sidaa daraadeed, waxaad hagaajin kartaa iPhone video ee orientation in ka yar 5 daqiiqo. Ka sokow in, waxa kale oo aad codsan kartaa saamaynta video kala duwan hufay aad videos oo u badbaadin doonaa mar kale u ciyaaro aad iPhone. Fursadaha kale ee wax soo saarka ka mid ah si toos ah u geliyaan gal Facebook ama YouTube iyo gubi in DVD.
Weey wanaagsan tahay? Waxaa Download hadda oo ay isticmaalaan rotator iPhone si isku shaandheyn iPhone videos aad.
1. Import iPhone videos aad rabto in aad isku shaandheyn
Si aad u dajiyaan iPhone video files (iPhone 5, iPhone 5S ka mid ah), si toos ah jiidi oo hoos u video files ka folder file aad kombiyuutarka si uu furmo suuqa hoose. Ayaa laga keeno iPhone video files muuqan doona Murayaad bidix. Ka dib markii in, kuwaa oo ay u Video Timeline ka mid mid.
Fiiro gaar ah: in dhammaan file ku raran yihiin in Video Timeline la wada muuqan biireen doonaa. Ha ku dahaadhaa mid video gal kale, ama haddii kaleto waxaad ka dillaacisay doonaa video ah laba iyo geli ee u dhexeeya.
2. video beddesha iPhone ku qasabno yar
Rotator iPhone Tani waa ay awoodaan in ay isku shaandheyn movie iPhone ay 90 darajo, 180 digrii, sidoo kale u socoto ama anticlockwise. Si tan loo sameeyo, si fudud u laban laabo guji clip video xulay in ay arbushin ilaa guddi tafatir ah. Waxaa jira 4 badhamada laga heli karaa:
Wareeji iPhone video 90 darajo u socoto. Labo jeer Laablaab, waxaad ka heli kartaa aragti 180 digrii. Mar kale Click, 270 degress, mar kale, isbedel ma.
Wareeji iPhone video 90 darajo anticlockwise oo si joogta ah, sida kor ku xusan.
Flip iPhone video gudban, yeellay.
Flip iPhone video vertical, bidix ilaa midig.
3. Save wareejiyo iPhone video
Hadda badbaadin video iPhone ayaa si joogto ah isku beddeli in desktop ama geliyaan si ay u YouTube sharing. Guji "Abuur" u muujiyo suuqa kala ouput ah, halkan aad kala dooran kartaa fursadaha kala duwan ee la heli karo, ku cad image hoos ku qoran.
Haddii aad rabto in aad u hagaagsan in iPhone inuu u ciyaaro on go ah, kaliya dooro "iPhone" qaab qaybiyay hoos "Device" tab. Dhammaan daydo iPhone waxaa la siiyaa, oo ay ku jiraan iPhone 5 iyo iPhone 5S.
Video tutorial, sida loo shaandheyn iPhone videos
Xalka 2: beddesha iPhone video la app iPhone video tafatirka
Tool aad u baahan tahay: Video beddesha Bilaashka ah ee macruufka
Ka sokow qalabka tafatirka video desktop, waxaa kale oo jira badan oo Chine video tafatirka inay isku shaandheyn aad duubo. Video beddesha Bilaashka ah ee macruufka, tusaale ahaan, waxay qaadan doontaa eegno videos ku saabsan camera kitaabkii duudduubnaa iyo ha aad doorato sida aad rabto in aad isku shaandheyn video ah. Habka warejin wuxuu qaataa daqiiqado yar, oo ku kici doonaa qaar ka mid ah nolosha batariga ee geedi socodka.
Baro macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Video beddesha Bilaashka ah ee macruufka >>
Sida loo Edit iPhone Videos